Zeitsparende Strategie Maka Social Media Marketing (Eine Leitlinie von Semalt)
Ị nwere ike ịchọta ndị ọzọ, dị ka onye na-elekọta mmadụ ahịa, na-elekọta Social Marketing ausreichend ma ọ bụrụ na ị na-achọ, sind Delegieren, Outsourcing und Automatisierung. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-enweghị ihe ọ bụla na-ekwu na ọ bụ nke a na-ekwu.
Artem Abgarian, der führende Experte von Semalt Digital Services, na-arụ ọrụ dị iche iche na Marketingstrategie maka Social Media, die Sie berücksichtigen sollten.
Ego Ole Ka A Ga - eme?
All netwọk mgbasa ozi ọha na eze bụ ngwaọrụ - allestimento sala per feste. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ewuli aha ha site na iji usoro dị iche iche dị, enwere nnukwu ihe omume nke ndị mmadụ zutere ga-agbaso. Otu ihe ị ga-ahụ bụ na ihe ịga nke ọma mgbasa ozi ọha na eze adịghị adabere na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ nwere ọwa nwere, ebe ọ bụ naanị ntakịrị nke ha nwere ike inwe mmasị na-enweghị mmasị n'ihe onye ga-enye.
Azụmahịa na Business na Ọ bụghị Social Media Presence
Ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma na-amụta ịkụziri ndị ọzọ ihe ịga nke ọma ha. Izi ihe bụ ụzọ kachasị mma isi zụlite azụmahịa ahụ. Onye nwere ike ma ọ bụ na-agba ọsọ usoro ma ọ bụ setịpụrụ onwe ha dị ka ndị ọkachamara na-akụzi. Ndị ọzọ dị ka Sam Ovens, jikọta ụzọ abụọ ahụ. Nyocha na ọmụmụ ihe na-abụ ụzọ kachasị esi gbasaa ozi ma na-eto eto.
Mgbasa mgbasa ozi anaghị efu ihe ọ bụla iji zụọ ahịa..Ọ dịkwa mfe iji ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ pụtaghị ihe ọ bụla, onye ọrụ kwesịrị ịkwụsị iji ya eme ihe. Dị ka onye ọchụnta ego, ọ dị mkpa itinye oge na mgbasa ozi ọha na eze iji jikọọ na ndị ahịa. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ ọrụ a na-arụsi ọrụ ike, nke na-eme ka o kwe omume na-edu ma ọ bụghị ndị na-eso ụzọ.
Nnukwu Echeghị Echiche na Mgbasa Ozi Ọhaneze
Akara ngosi mgbasa ozi na-eme ka ndị ọrụ nwee mmasị na ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ngwaahịa ha ịhụ ihe ha biputere ma ọ bụghị ihe onye nwe ha na-eme. Ndị na-eso ụzọ niile nke gosipụtara mmasị na-agafe agafe adịghị agụta dịka ndị na - eduga. Nke kachasị njọ bụ na ọtụtụ n'ime mmeghachi omume bụ igbu oge dịka ha bụ ọrụ nke bọtịnụ na-akpaghị aka. N'ikpeazụ, ọkachamara mgbasa ozi ọha na eze na SocialMediaToday.com na-egosi na ọwa mgbasa ozi ọha na eze enweghị ọnụ ọgụgụ ntụgharị dị elu. Enweghị ihe ọ bụla ị ga-eji na-etinye oge zuru oke na mgbasa ozi ọha na eze ma ọ bụrụ na kọntaktị adịghị ahụ akwụkwọ.
Inye Mgbasa Ozi Ọhaneze na-eduba n'ime Ahịa
Azịza nke ịgbanarị mgbasa ozi ọha na eze na-eduba n'ime ahịa dị ka oge na-ewe dị ka ọrụ azụmahịa ọ bụla nke na-eduga n'ịbawanye ahịa. Akwụsịghachi azụ, nchọtagharị, na omume yiri nke ahụ agaghị aga ịmị mkpụrụ. Ndị ọchụnta ego ekwesịghị ịnwe oge dị ukwuu na otu. Azịza ya bụ ezigbo mmekọrịta. Ụzọ kwesịrị ekwesị iji tọghata "Mmasị" na "Soro" bụ iji kọntaktị ma ọ bụ ekwentị kpọtụrụ ndị na-aza ajụjụ. Onye nwere ike ịhọrọ ịnye ndị ọrụ a ọrụ ndị a.
Na-azụ ahịa anụ ọhịa
Ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi "ndị ọkachamara" mara na ọ gaghị ekwe omume ịme ọtụtụ awa nke ụbọchị maka ahịa mmadụ. Ebumnuche n'azụ bụ iji ree ngwaahịa ha ka ọ bụrụ naanị ihe ngwọta iji kwado ihe niile n'ime oge. Usoro mgbasa ozi na-arụ ọrụ dị ka ngwá ọrụ iji mata ihe, na dịka ọwa ahịa. Ọ bụrụ na naanị ebumnuche nke itinye aka na mgbasa ozi ọha na eze bụ iji tọghata ndị na-eso ụzọ ka ndị na-azụ ahịa, mgbe ahụ ọ bụ oge dị elu iji chegharịa oge eji na ọwa ahụ n'ihi na ọ bụghị oge na mgbalị.